” ကို တံ ငါ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ” ကို တံ ငါ “	18
” ကို တံ ငါ “
Posted by ခင်ခ on Jan 30, 2015 in Creative Writing, Poetry | 18 comments
Mike says: . အင်း..အဲ့တံငါသည်တွေရှိလို့လည်း
.ဖမ်းမြဲဆက်ဖမ်းပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: နေမြဲ…..
Kaung Kin Pyar says: ကဗျာလေးဖတ်ပြီ ဘရာဗိုပါ လေးခရေ့….။
ဦးခင်ခ says: တစ်ချို့တွေရဲ့ ဘ၀တွေဟာ အသိနောက်ကို ဘ၀ကပြောင်းလဲ မလိုက်နိုင်တဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရ တွေ့မြင်လာရလို့ သူတို့ အတွက် ရင်မောမိပေမယ့် သူတို့ကတော့ သူတို့ဘ၀သူတို့ပျော်နေ နေသားကျနေလေရဲ့လေ။
Ma Ma says: တံငါသည်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀မို့ တရားတွေ နာလာကြရတဲ့အခါ တံငါ သည်တွေမှာလည်း ဇဝေဇ၀ါနဲ့ စိတ်စနောင့်စနင်း ဖြစ်ကြရတယ်။
အဲဒါကြာင့် ပတိရူပ ဒေသ၀ါသောစ ဆိုတာ အရေးကြီးတာ။
(ဒီစာကို သဂျီးမမြင်ပါစေနဲ့။) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: မွေးဇာတိနဲ့မွေးဖွားရာအမျိုးအနွယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းလား အမ မမ ကွန်မန့်ဖတ်ပြီးတွေးမိသွားတယ်လေ
မြစပဲရိုး says: တံငါတွေ သားသတ်သမား တွေ သာ ငရဲသွားရရင် စားတဲ့ သူတွေ ကိုပါ ငရဲ ခေါ်ဖို့ ယမမင်းကြီး ကို စန္ဒာ ပြလိုက်ကြပါ။
အာ့မှ မျှတ မှာ။ lol:-)))))
အလင်းဆက် says: .မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် ဆိုတဲ့ စကားကို မြင်ပြီး…
.အခုတလော.. ကျနော် မြင်တွေ့နေရတဲ့ မောင်နဲ့ မယ်တွေဟာဖြင့်…
.မောင်တစ်ထမ်း..ဆို..မယ်လည်း တစ်ထမ်းကို ဖြစ်လို့…
.မောင်ရော..မယ်ပါ… ဆတူ ထမ်းပိုးနေရတာတောင်မှ…
.လူတန်းမစေ့နိုင်ရှာတဲ့ ဘဝတွေ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တံငါတွေမှာ လူမွေးပြောင်တဲ့လူမရှိပါ။
တံငါအကြီးစား (ရေလုပ်ငန်းရှင်တွေမပါ )
တနေ့ရှာ တစ်နေ့စားတောင်မဝ ဆန်ပြုတ်နပ်မမှန်တဲ့တံငါများစွာ တွေ့ခဲ့ရ
ခင်ခ says: ဟုတ်လားဗျ အဲဒါတော့ သတိမထားမိဘူး
kai says: စားဖို့အကောင်ကို.. သေသေချာချာသန့်ရှင်းအဟာရဖြစ်အောင်မွေးပြီး.. စောင့်ပြီး.. ရှာပြီး. သတ်စားတာကိုက.. လူသားဘ၀အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုသမို့.. ကုသိုလ်…။
အဲလိုလုပ်တာတွေကို.. အကုသိုလ်ဆိုကြတာဟာ….. မှားတဲ့အမြင်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: သဂျီးအဲလိုဆိုလို့ ကျုပ်တွေးမိတာလေးတစ်ခုက ဈေးထဲသူများအသက်ပေးလိုက်တဲ့ သူများအသားကိုဝယ်တာ အလေးမပြည့်ချင်ဘူး အရနည်းတယ်ဆို အဆစ်ထဲ့ပေးပါအုံးတောင်းကြတယ်။
သူတစ်ပါးအသားကျ အဆစ်လိုချင်ကြတယ် ကိုယ်အသားလေး ခလုတ်တိုက်လို့ အသားဖတ်လေးလှန်သွားရင်ကို ဖြစ်သဲနေလိုက်ကြတာပ အဆစ်ထပ်မဖဲ့ချင်ကြဘူးလေ။( ပေါက်ကရအတွေးပါ)
kai says: ဆေးဆရာကြီးရယ်..။
လူဖျားနာရင်… အန်င်တိုင်ဘိုင်အိုးတစ်သောက်လိုက်ပြီး.. သတ္တ၀ါတွေဘီလီယန်ချီသတ်ပစ်ရတာပဲမဟုတ်လား…။
အသက်ရှိသတ္တ၀ါမှန်းလည်းသိ..။ သတ်လိုတဲ့ဆန္ဒလည်းရှိ…။ သတ်လည်းသတ်…။
ငါးပါး.. အဲ..အဲ.. ၈ပါးသီလ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက် says: ဘယ်သတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်…သေခါနီးအချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ…အတူတူပဲဆိုဗျ…
kai says: မထင်ပါဘူး…။
တလောကတင်.. . mole rat က.. နာကျင်မှုမရှိအောင်ဓာတ်တမျိုးခန္ဓာကထွက်တယ်ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်..။ အဲဒါနဲ့အဲဒီအကောင်ကနေ.. ကင်ဆာပျောက်ဆေးထုတ်မယ်ဆိုတာပဲ..။
ဦးနှောက်မှာ ..နာတယ်ဆိုတာကို သိဖို့.. နဗ်ကြောတွေကပို့လာတဲ့..ဒေတာကို.. ခံစားရယူရမယ့်အသိအစိတ်အပိုင်းတခုရှိရမယ်လေ..။
အဲဒါမရှိရင်တော့.. သေတယ်ဆိုတာ..ဘာမှန်းမသိ…။ ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာလည်း…မရှိ.။
လူမှာလည်း.. .ဦးနှောက်သေသွားရင်.. လူကနှလုံးခုန်အသက်ရှင်သွေးလည်ပါတ်နေပေမယ့်.. သေတယ်သတ်မှတ်ပါတယ်..။
တလောက.. ယူအက်စ်လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာ.. အထိုးခံရပြီးလဲကျလို့.. brain shift ဖြစ်သွားတဲ့..မောင်ရာပြည့်ကို.. အဲလိုသတ်မှတ်ပြီး.. ဆေးရုံမှာအဟာရပေးတာတွေဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။
naywoon ni says: ​လောကမှာ ရှင်​ဘုရင်​ရှိလို့ မိဖုရားရှိတာ ။ လို့​တွေးရင်​ ​နေသာထိုင်​သာရှိပါတယ်​ဗျာ
Shwe Ei says: -သတ်တဲ့သူတွေမှာတော့ သူတပါး အသက် သတ်လို့ အကုသိုလ်ဖစ်တယ်..
-စားတဲ့သူတွေမှာတော့ သူတပါးအသားစားလို့ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေကြွယ်ဝပီး ခွန်အားဖစ်စေတယ်ပေါ့ခညာ… :LOL:
ခင်ခ says: တယ်ဟုတ်တဲ့ အဆိုပါလားဗျ။ မှန်၏။